तपाईं नपत्याइराख्नुस्, हामी अघि बढिरहन्छौँ
- उद्धवराज भेटुवाल
१५ वर्षको पत्रकारिता कर्मलाई बिट मार्दै मूलधारको राजनीतिमा लागेको दुई महिना पुग्दै गर्दा मसँग धेरै शुभचिन्तकले विभिन्न जिज्ञासा, प्रश्न र आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजनीति भनेकै खराब मान्छेले गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित भएको समाजमा मानिसले म लागेको राजनीतिक पार्टी, हाम्रो एजेण्डा र भविष्यलाई लिएर ओठ लेप्राएका छन् ।
उनीहरूलाई विश्वास भइरहेको छैन कि विवेकशील साझा पार्टी पनि राजनीतिक दल हो । यो पार्टीसँग पनि समाज रुपान्तरणका स्पष्ट एजेण्डा छन् । हामीसँग पनि विकास र समृद्धिका सुनौला सपनाहरू छन् । हामीले भावी पुस्तालाई एउटा सग्लो र समुन्नत देश हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीलाई गहिरोसँग बोध गरेका छौँ । अहँ यो उनीहरूलाई पत्यार लागिरहेको छैन ।
धेरैलाई लागेको छ, यो त एउटा एनजीओ हो, पार्टी होइन । कतिले भन्छन्- खोई तपाईंहरूसँग राजनीतिक दर्शन, खोई एजेण्डा ? अलि राजनीतिक पार्टीजस्तो देखिनपर्‍यो नि, रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेहरूले फेसबुक र ट्वीटरमा कराएर राजनीति हुन्छ ? खोई संगठन ? खोई दलबल ? आदि, इत्यादि ।
यस्तो थुप्रै प्रश्नले घेरिरहँदा मलाई आज तिनै शुभचिन्तकहरूलाई सोध्न मन छ, भनिदिनुहोस् न त कसरी हुन्छ राजनीति ? सिकाइदिनुहोस् हामीलाई पनि राजनीतिका कखरा । हामीसँग नभएको र तपाईंहरू पछि लागेको कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा र मधेसवादी दललगायत पुरातनवादी दलहरूसँग भएको दर्शन के हो भनिदिनुहोस् । हामीसँग नभएर कांग्रेस, कम्युनिष्टसँग भएका एजेण्डा के हुन् भनिदिनुहोस् ? सूचना र प्रविधिको जमानामा फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेर नहुने राजनीति कहाँ लेखेर हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् । सिकाइदिनुहोस् हामीलाई पनि तपाईंहरूले निर्माण गरेका राजनीतिका जटिल जटिल परिभाषा ।
तर, सुन्नुहोस् है, हामी तपाईंहरूले सिकाएको त्यही दुर्गन्धित र भँडुवा राजनीति भने गर्न आएका होइनौं । त्यसैले हामीसँग छैनन् तपाईंहरूसँग भएका जस्ता अमूर्त शब्दहरूले भरिएका राजनीतिका डेट एक्स्पायर डिक्सनेरी । हामीसँग छैन तपाईंहरूका पार्टीले गाउँ-गाउँमा पड्काएका राइफल, बारुद र सुतली बम । न त हामीसँग छन् बैंक लुटेर पार्टी चलाउन सक्ने तपाईंहरूका जस्ता फौजी दस्ता । हामीले गाउँ-शहरका धनीमानीलाई सामन्ती घोषित गर्न सकेनौं । उनीहरूको खेतबारीमा झण्डा गाड्न सकेनौं । हामीले रुखमा झुण्ड्याएर शिक्षक मार्न सकेनौं । हामी एउटा आमाको काखबाट छुटाएर एउटा किशोरलाई छापामार बनाउन सक्दैनौं । हामीले गाउँ नै उजाड हुने गरी मान्छेहरूलाई शहर र विदेश धपाउन सकेनौं । अनि किन पत्याउनुहुन्थ्यो हामीलाई होइन ?
अनि हामीहरूसँग संसद्‍ भवनको कुर्सी भाँच्नसक्ने बाहुबली नेता छैनन् । हामीसँग सुत्केरी भत्ता पड्काउन सक्ने पुरुष सांसद पनि छैनन् । न त हामीसँग कार्यकर्तालाई बाँड्ने ठेक्कापट्टा नै छ । हेर्नुस् त हामीसँग के छ ? हामी निरीह छौँ । हाम्रो पार्टीमा प्राय सबै पढेलेखेका छन् । डिप्लोमा, डिग्री, पिएचडी गरेका छन् । हाम्रो पार्टीमा कोटपाइन्ट लगाउने मान्छे पनि छन् । कोट लाउने मान्छे त सामन्ती हुन्छ, शहरीया हुन्छ । हामी त शहरीयाको झुण्ड हौं, कहाँ राजनीतिक दल हुनु ! दुई-चार वटा रेलिङ नभाँची, दुई-चार जना ठूलाबडालाई कालोमोसो नदली, स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा ताला नठोकी हामी राजनीति गर्न लागेका छौँ । हेर्नुहोस् त हामी कति केटाकेटी छौँ । हामीलाई राजनीति भनेकै थाहा छैन । न त हामीसँग होलटाइमर कार्यकर्ता नै छन् । हामी त काम गर्दै राजनीति गर्छौं । फूलटाइम लाग्नुपर्‍यो नि राजनीतिमा होइन ?
हामी तीन छक्कमात्र होइन चार छक्क पर्छौं । होलटाइम राजनीति गर्ने तपाईंहरूका नेता कति क्षमतावान ? राजनीति र समाजसेवा गरेकै भरमा उहाँहरूको राजधानीमा ठूला-ठूला बंगला छन् । छोराछोरी देशविदेशका महँगा स्कुल कलेजमा पढ्छन् । नेता दाजुका घरमा भव्य बार (मदिरालय) छ । महँगा रक्सी छन् । भाउजुसँग मोटा-मोटा नेक्लेस छन् । दुई-चार गाडी र सय-पचास साडीको त के हिसाव गर्नु । नेताजीले जनताका लागि लड्दालड्दै, क्रान्ति गर्दागर्दै हेर्नुहोस् त कति प्रगति गर्नुभयो । हामीसँग त्यस्तो विलक्षण क्षमता नै छैन । अनि हामी कसरी राजनीतिक पार्टी बन्छौं । होइन ? हामीलाई कसरी पत्याउने होइन ?
देशमा रोजगारी र पुँजी सिर्जना नगरेर वा गर्ने क्षमता नभएर युवाहरूलाई विदेश लखेट्दा पनि खाडीमा बसेर युवाहरू तपाईंहरूकै गुनगान गाउँछन् । तपाईंहरूकै संगठन विस्तार गर्छन् । तपाईंकै नेतालाई टिकट खर्च ब्यहोरेर विदेश बोलाउँछन् र एकथान फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्छन् । लाइक, कमेन्ट, जय नेपाल र अभिवादन लेखिएका कमेन्ट त कतिकति । युवाहरूमा त्यस्तो अभूतपूर्व मोहनी लगाउनसक्ने अद्भूत क्षमता हामीसँग कता पाएर हुनु ? तपाईंहरूको व्यवस्थाले आहत भएर मरुभूमि पुगेका युवाहरू लास बनेर फर्कँदा पनि तपाईंहरूकै नेता श्रद्धाञ्जली दिन पुग्छन् । हेर्नुहोस् त क्या सहानुभूतिको भावना छ पुराना पार्टीका नेताहरूमा । हो, त्यसैले हामीलाई तपाईं राजनीतिक दल मान्न तयार हुनुहुन्न । हामीसँग त्यस्तो कुनै क्षमता नै छैन ।
हामीसँग मार्क्सवादका ठूला-ठूला किताब छैनन् । हामीसँग समाजवादका ठेलीहरूको ज्ञान छैन । हामीसँग दर्शन नै छैन होइन ? तपाईंको मार्क्सवादमा जस्ता सुन्दर अनुच्छेदहरू हाम्रा दस्तावेजमा छैनन् । हामी त फेसबुके पार्टी न पर्‍यौं । हो यो कुण्ठा नै हो । तपाईंहरूको बुझाइमा तपाईंका पार्टीजस्तो बन्न नसकेको कुण्ठा नै हो यो । यसैगरी बुझ्नुस् । केही फरक पर्दैन ।
हामीले भनेको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको मुद्दालाई तपाईं पत्याउन तयार हुनुहुन्न । किनकि यसमा वाद जोडिएको छैन । किनकि तपाईंमा पुरातन दलहरूको दासत्व यति गहिरोसँग गडेको छ कि नयाँ कुराहरू सुन्न, मनन् गर्न तपाईंको कान तयार नै छैन । सुकरातले भनेझैं तपाईंहरू अन्धकारको त्यो गहिरो सन्नाटामा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको आँखाले उज्यालो सहन गर्नै सक्दैन । तपाईंहरूले अँध्यारोलाई नै अन्तिम सत्य मान्नुभएको छ । उज्यालो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई भ्रमपूर्ण लाग्छ ।
हो हामी विवेकशील राजनीति गर्दैछौं । लोककल्याणसहितको लोकतन्त्र हाम्रो सार हो । हामी डर, धम्की, त्रास र हुलदंगाबाट होइन प्रेम, सद्‍भाव र भाइचाराको राजनीति गर्दैछौं । हिंसा, द्वन्द्व र अस्तव्यस्त नबनाइकन तपाईंहरू हाम्रो शालीन उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुभएको छैन । तपाईंहरू हामीलाई खिसिट्युरी गरेर मुतको न्यानोमा रमाउनुभएको छ । तपाईंले आदर्श मानेको नेताका घरमा बिहान-बिहान जदौं गर्न जानु तपाईंको राजनीतिक संस्कार हो । स्कुल भर्ना गर्न होस् या अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न जाँदा होस् तपाईं आफ्नो नेतालाई फोन गराएर जानुहुन्छ । तपाईंका नेता कस्ता शक्तिशाली हुर्नुस् त एक फोनमा काम हुन्छ । उस्तै परे तपाईंको नेताले अपराधी नै छुटाइदिन्छन् । त्यस्तो खतरा नेताहरू भएको पार्टीका मान्छेलाई हामीजस्ता नाथे पार्टीलाई किन पत्याउने होइन ? नपत्याउनुस् ।
तर, अन्तिममा तपाईंले नपत्याएपनि तपाईंको छोरा, छोरी, भाइ, भतिजा मनैदेखि विवेकशील साझा भइसकेका छन् । उनीहरूले देशभित्रै बिना भेदभाव सबैले शिक्षा स्वास्थ्य पाउनुपर्ने सामाजिक न्यायको आधुनिक मान्यतालाई बुझिसकेका छन् । आफ्नो सपना बनाइसकेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक यातायातमा भएको अस्तव्यवस्तताबाट मुक्ति पाउन विद्रोह गर्ने चेतना विकास गरिसकेका छन् । दिनानुदिन बिग्रिँदै गरेको हाम्रो पर्यावरण, ढलमा परिणत भइसकेका खोलानाला र जताततै मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध ढिलोचाँडो क्रान्ति गर्नै पर्ने आवश्यकतालाई बोध गरिसकेका छन् ।
त्यसैले तपाईं हामीलाई नपत्याइराख्नुस् हामी अघि बढिरहन्छौं । जुनदिन हामी क्रान्तिको बिगुल बजाएर तपाईंको अन्तस्करणसम्म तरंग ल्याउनेछौं त्यही दिन हामीलाई पार्टी मान्नुहोला । हाम्रो झण्डा बोक्नु होला । हामीसँगै एकाकार हुनुहोला । हामी पर्खने छौँ तपाईंको मनमस्तिष्कमा क्रान्ति अंकुरण नहुँदासम्म । तर, हामीलाई बैंक लुटेर, आमाहरूको काख रित्याएर, आमाहरूको सिउँदो पुछेर, नाबालकहरू टुहुरा बनाएर तपाईंले भनेजस्तो खतरा पार्टी बन्नुछैन यो चाहिँ सत्य हो ।
-भेटुवाल विवकेशील साझा पार्टीका नेता हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०७७, १२:५७:००